यौन इच्छा भएपछि महिलाले देखाउने ५ ब्यवहार हेर्नुस यस्तो छ ! – Todays Nepal
यौन इच्छा भएपछि महिलाले देखाउने ५ ब्यवहार हेर्नुस यस्तो छ !
संसारभरी नै एउटा मान्यता छ महिलालाई बुझ्न कठिन हुन्छ । केटीहरु कम बोलेर धेरै कुरा भन्छन् । पुरुषले महिलाका कुरा केवल बोलीबाट मात्र बुझ्न सक्दैनन् । उनीहरुको ब्यवहार पनि बुझ्नु महत्वपूर्ण हुन्छन् । महिलाले यौनिक चाहना पनि शब्दमै ब्यक्त नगर्ने एक अध्यनले देखाएको छ । यहाँ महिलाले यौन सम्बन्ध राख्न चाहेको समयमा देखाउने ५ ब्यवहारको चर्चा गरिएको छ ।
लिपिस्टिकको रङले खोल्छ महिलाको चरित्र, जान्नुहोस् कुन रङ लगाउने कस्ता ?
जापानमा समय भन्दा २५ सेकेण्ड अघि रेल हिडेपछि कम्पनीले माग्यो माफी